Cortexolone 17a-propionate ntụ ntụ (19608-29-8) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / Cortexolone 17A-propionate ntụ ntụ
SKU: 19608-29-8. Category: R & D mmeghachi omume
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nhazi nke Cortexolone 17a-propionate powder (19608-29-8), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Cortexolone 17a-propionate ntụ ntụ video
Cortexolone 17a-propionate ntụ ntụ isi agwa
aha: Cortexolone 17a-propionate ntụ ntụ
Molekụla Formula: C24H34O5
Ọbara arọ: 402.52
agba: White na-acha ọcha ntụ ntụ ntụ ntụ
Cortexolone 17a-propionate okirikiri
Chemical Names: cortexolone-17A-propionate,
Aha ndị ọzọ: CB-03-01, Winlevi ntụ ntụ, Breezula ntụ ntụ, 11-deoxycortisol 17a-propionate, Cortexolone 17a-propionate ntụ ntụ
Cortexolone 17A-propionate Ugboro
Cortexolone 17a-propionate bụ steroidal synthetic steroidal antiandrogen - akpan akpan, onye na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na - emepụta nke Cassiopea na Intrepid Therapeutics maka ọgwụ dị na ọgwụgwọ nke ọnọdụ etrogen na-adabere gụnyere acne vulgaris na androgenic alopecia (male-pattern ntutu isi).
Kedu ụdị usoro nke Cortexolone 17A-propionate
Cortexolone 17α-propionate 1% ude, ihe ọhụrụ nwere ike antiandrogen maka ọgwụgwọ n'elu nke acne vulgaris. Otu onye na-anya ụgbọelu, ọmụmụ ihe ọnụ abụọ na-ekpo ọkụ na vs. placebo na tretinoin 0 · 05% ude.
Acne vulgaris bụ nkwarụ nke ọkpụkpụ pilosebaceous nke ndị androgens na-enye aka na mmalite na nnọgidesi ike. Ya mere, ojiji nke antiandrogens nwere ike irè; Otú ọ dị, antiandrogens maka iji ederede adịghị adị na ahịa. Cortexolone 17a-propionate bụ ihe ọhụrụ nwere ike isi na-achịkwa antiandrogen nwere ike ịba uru na acne vulgaris.
Iji nyochaa nchekwa na nrụpụta ihe dị na Cortexolone 17a-propionate 1% ude na acne vulgaris ma e jiri ya tụnyere placebo na 0 · 05% ude.
Mmadụ iri asaa na asaa nwere mmetụ ihu na 2-3 dị ka Investigator's Global Assessment (IGA) si nweta randombo (n = 15), ma ọ bụ Cortexolone 17α-propionate 1% cream (n = 30), ma ọ bụ 0 · 05 tretinoin % ude (n = 32) otu ugboro n'ụbọchị n'ụbọchị ụra maka izu 8. A na-enyocha nrụpụta ahụike nke ọ bụla na 2 izu gụnyere ngụkọta ọnya aghara aghara (TLC), ụbụrụ na-egbu egbu (ILC), mkpụrụ edemede acne (ASI) na IGA. Nyocha nchedo gụnyere njedebe mpaghara mpaghara, ule nyocha ụlọ, nyocha anụ ahụ, ihe ịrịba ama dị mkpa na ndekọ nke ihe ọjọọ.
A kwadoro ikikere CB-03-01, ọ dịkwa mma karịa placebo maka TLC (P = 0 · 0017), ILC (P = 0 · 0134) na ASI (P = 0 · 0090), nakwa na ọ dị irè karị. karịa onye nyocha. Ngwaahịa ahụ mekwara ngwa ngwa nke 50% mmelite n'ime ihe niile dị n'elu. CB-03-01
Nnyocha ọmụmụ a na-akwado ihe kpatara ya iji jiri antiandrogens na-agwọ ọrịa acne vulgaris. Cortexolone 17a-propionate 1% ude yiri ka ọ dabara na profaịlụ nke ezigbo antiandrogen maka iji ihe ederede.
Kedu Cortexolone 17A-propionate na-arụ
Cortexolone 17A-propionate (CAS 19608-29-8), ma ọ bụ 11-deoxycortisol 17a-propionate, bụ antondrogen steroidal synthetic, nke bụ kpọmkwem, onye na-anabata ihe na-emepụta etrogen - nke Cassiopea na Intrepid Therapeutics na-emepụta iji mee ihe dị ka ọgwụ dị n'elu na ọgwụgwọ na-adabere na androgen-gụnyere gụnyere acne vulgaris na androgenic alopecia (ntutu isi nwoke). Ọ bụ C17α propionate ester nke 11-deoxycortisol (cortexolone); A chọpụtara na ndị na-atụghị anya na 17-deoxycortisol nwere C11a na-enwe ọrụ antiandrogen, na 17a-propionate cortexolone ka a họọrọ maka mmepe nke dabeere na profaịlụ ọgwụ kacha mma.
N'ime oke, a chọpụtala ọgwụ ahụ iji nweta ọrụ antiandrogen dị ike, ma ọ bụ ọrụ nke antiandrogen ka ọ na-arụ ọrụ site na nrubeisi subcutaneous. Tụkwasị na nke a, cortexolone 17a-propionate abụghị progonadotropic, na-atụ aro na ọ bụ nhazi nke ndụ. N'ihe na-adịghị mma, ọkpụkpụ nke ọgwụ ahụ karịrị nke progesterone, flutamide, na finasteride na nke yiri nke cyproterone acetate.
Otu ule na-enye nsogbu na 2011 nke ụmụ nwoke na-agwọ ọrịa 17α-propionate 1% cream for acne chọpụtara na ọgwụ ahụ dị nnọọ mma ma jiri nwayọọ belata mgbaàmà nke otutu. Ọzọkwa, irè ya dị nnọọ ukwuu karịa nke onye na-arụ ọrụ, tretinoin 0.05% ude. N'ihe banyere 2017, ọgwụ ahụ nọ na-adọ aka na-adọkpụ maka ule na-esiri ike maka ọrịa acne vulgaris na phase II maka androgenic alopecia.
Cortexolone 17a-proprionate, Breezula ntụ ntụ na ụdị polymorphic: mbụ patent ezinụlọ, na-agwụ na United States na 2022 / 23 na na 2022 na ndị ọzọ nke ụwa, na-ekpuchi iji ọgwụ nke ụlọ maka ọgwụgwọ nke otutu, alopecia na ọrịa ndị ọzọ; ụlọ nke abụọ a na-emepụta ihe niile na-ekpuchi ụdị akwụkwọ APC niile a maara, ihe ndị nwere ụdị API ahụ na ọgwụ ndị metụtara ya na-agwọ ọrịa, AGA na ọrịa ndị ọzọ: agbanyelarị ezinụlọ a patent na United States, Europe, Canada, Japan na mba ndị ọzọ, ga-agwụ na 2030 na United States na 2028 na mpaghara ụwa ọzọ.Breezula ntụ ntụ
Cortexolone 17a-propionate Nkọ Powder
Cortexolone 17a-propionate Ntụziaka ntụ ntụ ntụ ntụ
Ịjụ ajụjụ maka ndị na-anọchite anya ndị ahịa anyị (CSR) maka nkọwa, maka akwụkwọ ntụziaka gị.Winlevi
Cortexolone 17a-propionate nwere mmetụta ọ bụla
Cortexolone 17a-propionate bụ steroidal-ester nke ọhụrụ, onye na-ahọrọ na-ahụkarị androgen-antagonist, nke nwere ọrụ mgbochi ịmịnye ahụ, nke yiri ka ọ dị mma maka ọgwụgwọ nke acne vulgaris. CB-03-01 na-arụ ọrụ na etrogen-receptor na-enweghị igbochi 5α-reductase n'ime akpụkpọ ahụ. Onye na-agwọ steroid na-abanye n'ime anụ ahụ mmadụ, ọ na-emezikwa ka ọ bụrụ nne na nna na-enweghị nna na cortexolone. N'ụzọ dị oke mkpa, ka ọ dị ugbu a, egosighi ụdị mmetụta ọ bụla dị na mpaghara ma ọ bụ usoro usoro ọgwụgwọ steroid.
Otu esi zụta Cortexolone 17a-propionate ntụ ntụ si AASraw
Cortexolone 17A-propionate Ntụziaka ntụ ntụ ntụ ntụ:
Kasị Mma Ọkpụkpụ Nri Maka Ụmụ nwoke: Cortexolone 17A-propionate ntụ ntụ (CB-03-01)